Ngwa: Ihe omume n'èzí, ihe ngosi, nnukwu ụlọ ahịa, ahịa, ihe ngosi akpaaka wdg, ebe ọ bụla ịchọrọ ịdọrọ uche ndị mmadụ.
Ugbu a ọtụtụ n'ime ọkọlọtọ ọkọlọtọ nke karịrị 5m elu bụ aluminom ogwe nwere tank mmiri, ọ bụ nnukwu maka ibufe / naanị otu ọkọlọtọ rectangle dị / ọkọlọtọ na-ejikarị osisi / okporo osisi mebiri emebi na oke ifufe. Ya mere, anyị haziri usoro ọkọlọtọ ọhụrụ a maka nnukwu ọkọlọtọ ọkọlọtọ.
Nnukwu ogwe osisi ọkọlọtọ anyị bụ carbon composite, nke dị arọ, na-agbanwe ma na-eguzogide ọgwụ na oke ifufe. Ọkpụrụkpụ mkpanaka ahụ karịrị nha okporo osisi mgbe niile, yabụ enwere ike iji ya ọbụlagodi oke ifufe dị ka ọkọlọtọ n'èzí Giant.
Otu osisi nwere ike ime ụdị ọkọlọtọ 3 dị iche iche, gụnyere ọkọlọtọ agụba, ọkọlọtọ akwa akwa na ọkọlọtọ akụkụ anọ (naanị site na ịgbakwụnye ogwe ogwe aka). Dabere na okporo osisi 5m, ị nwere ike ịgbakwunye akụkụ ọzọ iji mee nha dị elu. Ọ dị mma maka ndị ọrụ njedebe nwere ụdị ọkọlọtọ dị iche iche, dịkwa mfe maka ndị na-ere ahịa ijikwa ngwaahịa ahụ.
Obere ọkọlọtọ anyị nwere akpa akpa oxford nke nwekwara ike ibuba ọkọlọtọ na ụfọdụ ntọala n'ime. Akụkụ mbukota erughị 1.2m nke dabara maka pallet Europe ma chekwaa nnukwu ego maka njem ụgbọ njem.
Nhọrọ ntọala gụnyere Ground spike, Cross base, Car Mount Stand na Foldable Giant base iji zute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa niile maka nnukwu osisi. Enwere ike ịgbakwunye isi mmiri na obe maka nkwụsi ike ka mma
A tọhapụrụ nnukwu ntọala anyị na-agbanwe agbanwe na 2020 ma atụ aro ya nke ọma na isi ihe ire ere atọ:
1. With bearing kwe ka okporo osisi bugharia na ifufe, ọkọlọtọ agaghị kechie gburugburu osisi
2.Engineered Alu frame jide n'aka na ọ bụ obere ngwugwu
3.Suitable maka ọtụtụ ngwa, Peg ọdabara / akpa aja aja ma ọ bụ arọ mmiri dị
(1) Malitere site WZRODS gburugburu ụwa
(2) Ụdị 3 dị iche iche nwere otu usoro osisi, chekwaa ọnụ ahịa gị na ohere ngwaahịa gị
(3) Ogwe ihe mejupụtara Carbon na-enye ọkwa siri ike, ike na mgbanwe karịa ogwe osisi Aluminom.
(4) Nkwụnye ntinye dị mfe iji kpokọta & chekwaa n'ọnọdụ
(5) Ọtụtụ ntọala dị ka dabara ngwa dị iche iche
(6) Ntọala niile nwere sistemu na-agbagharị agbagharị, zere ọkọlọtọ si na tangled.
(7) Nke ọ bụla set na-abịa na a ebu akpa, fechaa na obere
Koodu ihe Ụdị nku Ụdị akwa mmiri Udi rektangulu GW kwa setịpụ Ogologo mbukota
Ngosipụta elu Ogo ọkọlọtọ Ngosipụta elu Ogo ọkọlọtọ Ngosipụta elu Ogo ọkọlọtọ
GTB-s 5.8m 5.5m 4.4m 0,9kg 1.2m
Nke gara aga: Ọkọlọtọ anya mmiri/nbụ mmefu ego
Osote: 4 na 1 Sistemu
Ogwe ọkọlọtọ mgbasa ozi
Sistemụ mkpanaka ọkọlọtọ mgbasa ozi
Ogwe ọkọlọtọ na-efe efe
Okpokoro ọkọlọtọ enwere ike ibugharị